अमेरिकाले अहिले सम्म कै शक्तिशाली मिसाइल सिरियामा प्रहार, कति शक्तिशाली छ त अमेरिकाले सिरियामा हानेको ‘टमहक मिसाइल’ ? जुन अमेरिकाले यो भन्दा अगाडी सद्दाम हुसेन बिरुद्द इराक र गद्दाफी बिरुद्द लिबियामा प्रहार गरेको थियो – जान्नुहोस « Sajha Page
अमेरिकाले अहिले सम्म कै शक्तिशाली मिसाइल सिरियामा प्रहार, कति शक्तिशाली छ त अमेरिकाले सिरियामा हानेको ‘टमहक मिसाइल’ ? जुन अमेरिकाले यो भन्दा अगाडी सद्दाम हुसेन बिरुद्द इराक र गद्दाफी बिरुद्द लिबियामा प्रहार गरेको थियो – जान्नुहोस
प्रकाशित मिति: April 14, 2018
एजेन्सी: अमेरिकाले सिरियामाथि एक पटक फेरि हमला गरेको छ । यस पटक अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली टम हक मिसाइल हानिएको छ ।
टम हक मिसाइल अमेरिकी सेनाकव सबैभन्दा शक्तिशाली र अचुक मिसाइल हो । जसको अमेरिकाले विगत २० वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ ।अमेरिकाले एक निश्चित र सुरक्षित दुरीबाट अचुक हमला गर्नुपर्‍यो भने टम हक मिसाइल प्रयोग गर्दै आएको छ ।
सिरियामा चरमपन्थी संगठनको ठेगानामा अमेरिकाले पहिले पनि हवाई हमला गरिसकेको छ । सन् २०१७ मा पहिलो पटक अमेरिकाले सिरियामाथि सीधै कारबाही थालेको थियो । यो हमले सिरियाली सरकारविरुद्ध गरिएको थियो । सिरियामा सन् २०११ देखि युद्ध भइरहेको छ ।
अचूक निशाना, लामो दुरी
तपाईँलाई लाग्न सक्छ, आखिर के हो त टम हक मिसाइल ? यसमा त्यस्तो के छ र अमेरिका ठुला युद्धमा यही हतियारमा निर्भर रहन्छ ?
छ मिटर लामो, करिब डेढ हज़ार किलो तौलवाला यो मिसाइल लामो दूरीसम्म क्षति गर्न सक्षम छ । यी मिसाइलमा ४५४ किलोग्राम विस्फोटक हालिएको हुन्छ ।
टमहक मिसाइल ८८५ किलोमीटर प्रतिघण्टाको गतिमा १६०० किलोमिटरको दुरीमा रहेको आफ्नो निशानालाई सजिलै तहसनहस गर्न सक्छ । रेदियन कम्पनीका अनुसार टम हक विश्वकै सबैभन्दा अत्याधुनिक क्रुज मिसाइल हो ।
खाडी युद्धको समयदेखि
यो मिसाइल जीपीएस प्रविधिमा काम गर्छ । टम हक मिसाइल पनि चुक्न सक्छ । तर यो मिसाइल निशाना भन्दा १० मिटर भन्दा धेरै टाढा भने जाँदैन ।
अमेरिकाको रेदियन कम्पनी टम हक मिसाइलको निर्माण गर्छ । कम्पनीका अनुसार टम हक विश्वकै सबैभन्दा अत्याधुनिक क्रुज मिसाइल हो ।
समाचार अनुसार टम हक मिसाइलको निर्माण दुई हजार भन्दा धेरै पटक प्रयोग भइसकेको छ । यो मिसाइलको ५०० भन्दा धेरै पटक परीक्षण भइसकेको छ।
टम हक मिसाइलको लामो इतिहास पनि छ । ९० को दशकमा खाड़ी युद्धको समयदेखि टम हक मिसाइल अमेरिकी हतियारमा सबैभन्दा अहम बन्दै गएको छ ।
त्यो बेला अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी देशको गठबन्धनमा इराकमाथि सैन्य कारबाही गरिएको थियो । त्यो बेला अपरेशन डेजर्ट स्टर्म चलाइएको थियो । अमेरिकाले पहिलो पटक टम हक मिसाइलको प्रयोग खाडी युद्धको समयमा अपरेशन डेजर्ट स्टर्ममा गरेको थियो ।
केवल इराक मात्रै होइन लिबियामा पनि टम हक मिसाइल प्रयोग भइसकेको छ । सन् २०११ मा जब कर्नेल गद्दाफीविरुद्ध नेटो देशले कारबाही चलाएको थियो त्यो बेला टम हक मिसाइललाई उत्कृष्ट मानिएको थियो ।
अमेरिकाले टम हक मिसाइलको प्रयोग सन् २०१४ मा आफूलाई इस्लामिक स्टेट बताउने चरमपन्थी संगठनविरुद्ध प्रयोग गरेको थियो ।
आईएसविरुद्ध यो हमला सिरियामा गरिएको थियो । त्यस बेला फारसको खाडी र लाल सागरमा रहेका दुई जहाजबाट ४७ टम हक मिसाइल हानिएको थियो ।
लिबिया र सिरियापछि यमनमा तीन रडार ठेगाना नष्ट गर्नका लागि टम हक मिसाइल प्रयोग गरिएको थियो । सन् २०१७ मा पूर्वी भूमध्यसागरमा रहेका दुई युद्धक जहाजबाट अमेरिकाले सिरियाको एक एयरबेसमा ५९ टम हक मिसाइल हानेको थियो ।